MATIU 25 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (MAT 25)
Ise nꞌime ha maara ihe, ma ise ndị ọzọ bụ ndị nzuzu.
Ise ndị nzuzu ahụ weere iheọkụ ha, ma ha ejighị mmanụ ọkụ ga-ezuru ha.
Ise ndị maara ihe wụjuru mmanụ nꞌiheọkụ ha, ma tinyekwara onwe ha karama mmanụ ọkụ ọzọ.
“Mgbe onye na-alụ nwụnye ọhụrụ ahụ nọrọ tee anya nꞌọbịbịa ya, ụmụ agbọghọ nile ahụ dinara ala rahụ ụra.
Nꞌetiti abalị e tiri mkpu nꞌoke olu sị, ‘Onye na-alụ nwụnye ọhụrụ na-abịa, pụtanụ gaa zute ya!’
“Mgbe ahụ ụmụ agbọghọ nile biliri mụnye ọkụ ha.
Ise ndị nzuzu ahụ rịọrọ ise ndị maara ihe sị, ‘Biko, wụnyetụrụnụ anyị ụfọdụ nꞌime mmanụ ọkụ unu, lee na iheọkụ anyị na-anyụ anyụ.’
“Ndị maara ihe zara ha sị, ‘Ọ̀ dịghị! Mmanụ ọkụ anyị nwere adịghị ukwuu, ọ gaghị ezuru anyị na unu. Kama gaanụ nꞌebe a na-ere mmanụ ọkụ zụrụ nke ga-ezuru unu.’
“Ụmụ agbọghọ ndị nzuzu ahụ gara. Ma mgbe ha pụrụ ịzụta mmanụ ọkụ ahụ, onye na-alụ nwụnye ọhụrụ bịarutere. Ụmụ agbọghọ ndị jikeere ejike gara zute ya, sorokwa nꞌoriri ọlụlụ nwụnye ahụ. E mechikwara ọnụ ụzọ.
“Emesịa, ise ndị nzuzu ahụ lọghachiri guzo nꞌezi kụọ aka nꞌụzọ, kpọọkwa oku sị, ‘Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, megheere anyị ụzọ!’
“Ma ọ zaghachiri ha sị, ‘Amaghị m ndị unu bụ.’
“Ya mere, na-anọgidenụ na che, nꞌihi na unu amaghị ụbọchị ahụ, ma ọ bụ oge ahụ m ga-alọghachi.
“O nyere ohu ya nke mbụ narị naịra ise. Ohu nke abụọ ka o nyere narị naịra abụọ. O nyere onye nke ikpeazụ otu narị naịra. O nyere ha nꞌotu nꞌotu dị ka ike ha ha. Mgbe o mesịrị otu a, ọ hapụrụ ha gaa ije ya.
Ohu ahụ natara narị naịra ise weere ego ahụ malite ịzụ ahịa. Ngwangwa o ritere narị naịra ise ọzọ nꞌuru.
Otu a kwa, onye nke e nyere narị naịra abụọ zụpụtakwara narị naịra abụọ ọzọ nꞌuru.
“Ma ohu ahụ natara otu narị naịra gara gwuo ala lie ya, nꞌihi ichezi ya nke oma.
“Mgbe ogologo oge gasịrị, nna ha ukwu lọtara site nꞌije ya. Ọ kpọkọtara ha nile ka ha gụzie ego ya.
Nwoke ahụ o nyere narị naịra ise batara wetakwa narị naịra ise ọzọ. Ọ gwara nna ya ukwu sị, ‘I nyere m narị naịra ise, ma ugbu a azụpụtala m narị naịra ise ọzọ.’
“Onye nke e nyere narị naịra abụọ bịara sị, ‘Nna anyị ukwu, i nyere m narị naịra abụọ. Lee nꞌebe a, azụpụtala narị naịra abụọ ọzọ nꞌuru.’
“Onye e nyere otu narị naịra batara sị, ‘Nna anyị ukwu, amaara m onye ị bụ. Ị bụ onye aka ntagide. Ị na-ewe ihe ubi nꞌebe ị na-akụghị mkpụrụ. Ị na-achịkọtakwa nꞌebe ị na-agbasaghị.
“Nna ya ukwu zara ya sị, ‘Ohu ọjọọ na onye umengwụ! Ị maara na m na-ewe ihe ubi nꞌebe m na-akụghị mkpụrụ, na-achịkọtakwa nꞌebe m na-agbasaghị.
Ị gaara etinye ego m nꞌaka ndị na-eche ego, ndị gaara akwụghachi ya na ụma ya.
Napụtanụ ya narị naịra ahụ o ji, ma were ya nye nwoke ahụ ji narị naịra ise!
Chụpụnụ ohu ọjọọ a na-abaghị uru nꞌọchịchịrị ebe ọ ga-anọ kwaa akwa, taakwa ikikere eze ya.’
Mba nile nke ụwa ga-ezukọtakwa nꞌihu m. M ga-ekewapụta ha, otu obodo site nꞌibe ya, dị ka onye ọzụzụ atụrụ si ekewapụta ụmụ atụrụ site nꞌụmụ ewu.
M ga-edebe ụmụ atụrụ ahụ nꞌakụkụ aka nri m, ma ụmụ ewu ga-anọ nꞌaka ekpe m.
“Mgbe ahụ, mụ bụ eze, ga-asị ndị nọ nꞌaka nrị m, batanụ nꞌime alaeze m, unu ndị Nna unu gọziri agọzi. Batanụ nꞌime alaeze nke e doziiri unu site na mgbe e kere ụwa.
Nꞌihi na mgbe agụụ gụrụ m unu nyere m nrị. Mgbe akpịrị kpọrọ m nkụ unu nyere m mmiri ọṅụṅụ. Mgbe m na-agba ọtọ, unu zụtara uwe nye m, mgbe m dara ọrịa unu lekọtara m. Anọkwara m nꞌụlọ mkpọrọ unu bịara leta m.
“Ndị ezi omume ahụ ga-ajụ m sị, ‘Onyenwe anyị, olee mgbe anyị hụrụ gị ka agụụ na-agụ gị anyị enye gị nri? Olee mgbe anyị hụrụ gị ka akpịrị na-akpọ gị nkụ, anyị ekuru mmiri ọṅụṅụ nye gị?
Olee mgbe kwa ka anyị hụrụ gị dị ka onye ọbịa anyị akpọbata gị nꞌime ụlọ anyị? Olee mgbe kwa ka anyị hụrụ gị ka ị na-agba ọtọ anyị enye gị uwe?
Olee mgbe kwa ka anyị hụrụ gị nꞌọrịa, ma ọ bụ nꞌụlọ mkpọrọ anyị abịa leta gị?’
Nꞌihi na mgbe agụụ na-agụ m, unu enyeghị m ihe ọ bụla ka m rie. Mgbe akpịrị na-akpọ m nkụ unu ekunyeghị m mmiri ka m ṅụọ.
Mgbe m nọ dị ka ọbịa unu akpọbataghi m nꞌulo unu, mgbe m na-agba ọtọ unu enyeghị m uwe ka m kpuchie ọtọ m. Mgbe ahụ na-esighị m ike unu elekọtaghị m. Mgbe m nọ nꞌụlọ mkpọrọ, unu abịaghị leta m.
“Mgbe ahụ ha ga-azakwa sị, ‘Onyenwe anyị, olee mgbe anyị hụrụ gị ka agụụ na-agụ gị, ma ọ bụ ka akpịrị na-akpọ gị nkụ, ma ọ bụ oge ị bụ onye ọbịa, ma ọ bụ oge ị na-agba ọtọ, ma ọ bụ oge ị nọ nꞌọrịa, ma ọ bụ ị nọ nꞌụlọ mkpọrọ, ma anyị elekọtaghị gị?’
“M ga-aza ha sị, eziokwu ahụ bụ nke a, mgbe ahụ unu jụrụ inyere otu nꞌime ndị a dị nta aka, ọ bụ m ka unu jụrụ inyere aka.